झारफुक गर्ने बाहानामा कोठामा गएर महिलालाई ज,’बर्जस्ती क,’रणी गर्ने पुरुष पक्राउ – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाजझारफुक गर्ने बाहानामा कोठामा गएर महिलालाई ज,’बर्जस्ती क,’रणी गर्ने पुरुष पक्राउ
झारफुक गर्ने बाहानामा कोठामा गएर महिलालाई ज,’बर्जस्ती क,’रणी गर्ने पुरुष पक्राउ
पाल्पा – झारफुक गर्ने बहानामा महिलालाई ज,’बर्जस्ती क,’रणी गर्ने एक जना पुरुषलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । तानसेन–३, भगवती टोलमा बसेर झारफुक गर्ने तनहुँ जिल्ला शुक्लागण्डकी नगरपालिका वडा नं. १० खैरेनीका ३२ वर्षिय केदार रनपाललाई प्रहरीले बुधबार पक्राउ गरेको हो ।
पक्राउ परेका पुरुषले सोमबार राति साढे १० बजे तानसेन बस्ने ३० वर्षकी महिलाको कोठामा गएर झा,’रफुक गर्ने बहानामा ज,’बर्जस्ती ब,’लात्कार गरेका थिए । पक्राउ परेका पुरुषले ज,’बर्जस्ती गरेको भनी ती महिलाले छिमेकीलाई जानकारी गराएपछि छिमेकीले प्रहरीलाई खबर गरेका थिए ।
लगत्तै उनलाई मंगलबार बिहान २ बजेतिर पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रहरी नायव उपरीक्षक रामेश्वर त्वातीले जानकारी दिनुभयो । सोमबार मात्रै प्रहरीले १३ वर्षकी बालिकालाई ज,’बर्जस्ती क,’रणी गरेको आरोपमा तानसेन–११, का २० वर्षिय प्रेम सुनारलाई पक्राउ गरेको थियो ।
यो पनि पढ्नुहोस –करिब डेढ वर्ष को’रोना महामारीसँग जुधेपछि गएको अगस्ट र सेप्टेम्बर महिना विश्वकै लागि राहतको समय भयो। यी दुई महिना को’रोना संक्रमण र मृत्युको तथ्यांक मात्र कम भएन कि विश्वको कुनै कुनाबाट कुनै नयाँ भेरिएन्ट पत्ता लागेको खबरसमेत आएन।
यही बेला बेलायत र अमेरिकाजस्ता देशका बासिन्दालाई मास्कबाट छु’टकारा मिल्यो। अन्य देशको जनजीवन पनि क्रमशः सामान्यतर्फ जाँदैछ। यो खुसीको कुरा हो। तर, यस्तो बेला कुनै खराब खबर छ भने त्यो पनि को’रोना म’हामारीसम्बन्धी नै हुनसक्छ।
सायद हामी छिटै एउटा नयाँ प्रकारको महामारीको सामना गर्न गइरहेका छौँ। वैज्ञानिकहरुले यो संभावित महामारीलाई ‘पोष्ट को-भि’ड-१९ कन्डिसन’, ‘एक्युट को-भि’ड-१९’ वा ‘लङ को-भि’ड’ नाम दिइरहेका छन्। महामारी विशेषज्ञले यस्तो महामारीबारे विगत एक वर्षदेखि आशंका गरिरहेका थिए।
तर, अहिलेसम्म यसको कुनै लक्षण वा उपचारसँग जोडिएको ठोस उपलब्धि हासिल गर्न सकिरहेका छैनन्। विश्वभरिका जनतालाई राहत दिने एउटै तथ्य के हो भने, ‘पोष्ट को-भि’ड-१९’ संक्रामक छैन। यसको जोखिममा त्यो व्यक्ति मात्र छ, जो पहिला को-भि’ड संक्रमित बनेको छ।
के हो लङ को-भि’ड?विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार छिटोछिटो श्वासप्रश्वास हुनु, मा’नसिक र शारीरिक थकान हुनु लङ को-भि’डका लक्षण हुन्। त्यसबाहेक छाती दु’ख्ने, बोल्न गाह्रो हुने, डि’प्रेसन, चि’न्ता, ज्वरो, टाउको दु’ख्ने, तीव्र गतिमा कपाल झ’र्ने जस्ता लक्षण पनि देखिन्छन्।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार को’रोना संक्रमण पूर्णरुपमा ठीक हुन १४ दिन लाग्छ। कसैलाई १४ दिनपछि पनि लक्षणहरु रहिरह्यो भने त्यसलाई गम्भीर मानिन्छ। कसैलाई चार हप्तासम्म संक्रमण देखिए त्यसलाई ‘एक्युट को-भि’ड-१९’ भनिन्छ। त्यस्तै १२ हप्तासम्म लक्षण देखिए ‘अ’नगोइङ सिम्प्टोम्याटिक कोभिड-१९’ र १२ हप्ताभन्दा बढी लक्षण देखिइरहे लङ कोभिड भनिन्छ।
विशेषज्ञहरुका अनुसार लङ को-भि’डका बि’रामीमा माथि उल्लेख गरिएका लक्षण तीन महिनादेखि एक वर्षसम्मै देखिन सक्छ। तर, महामारी सुरु भएको बल्ल डेढ वर्ष पुगेको हुनाले वैज्ञानिकले यसबारे स्पष्ट रुपमा बताउन सकेका छैनन्। लङ को-भि’डको अहिलेसम्म कुनै औ’षधि वा उपचार पद्दति छैन।
केही तथ्य र अनुभवका आधारमा भन्न सकिन्छ कि खोप लगाएका व्यक्तिमा को’रोना संक्रमणपछि लङ को-भि’ड हुने संभावना कम छ। को’रोना भाइरसले मुटु र मस्तिष्कका कोषहरुलाई क्षति पुर्‍याउँछ। यस्तो क्ष’तिबाट मा’नसिक थकान र कमजोरी हुन्छ। स्वाद र गन्धको ज्ञान हुँदैन।
मुटुसँग जोडिएका र’क्तनली थुनिने जो’खिम भएकाले ‘हर्ट अ’ट्याक’ पनि हुनसक्छ। को’रानाका बि’रामी निको भएपछि पनि भा’इरसको केही अंश शरीरमा रहिरहने बताइएको छ। ती भाइरस केही समयसम्म निस्क्रिय हुन्छन्। त्यसपछि नयाँ तरिकाले शरीरलाई
प्रभावित गर्न थाल्छन् र अन्य भाइरसहरुको संक्रमणजस्तै व्यवहार देखाउँछन्। बिस्तारै यसले जटिलता निम्त्याउँछ। यी अनुभव र तथ्यका आधारमा बाहिर आएका जानकारी हुन्। वैज्ञानिकहरुले अहिलेसम्म लङ को-भि’डबारे ठोस धारणा भने ल्याउन सकेका छैनन्।
किन चिन्ता गर्नु जरुरी छ?लङ को-भि’डबारे केही महिनाअघि मात्र चर्चा हुन सुरु भएको हो। यसबारे भएको अनुसन्धानले संकेत गरेको छ कि को’रोना संक्रमण भएका १० देखि ३० प्रतिशतलाई लङ को-भि’ड भएको छ। खासगरी अस्पताल नै भर्ना गर्नु परेका गम्भीर संक्रमितलाई लङ को-भि’डको जोखिम छ।
केही अनुसन्धानले ज्येष्ठ नागरिकमा यसको समस्या बढी भएको देखिएको छ। त्यस्तै महिलालाई पनि लङ को-भि’ड हुने संभावना करिब दुई गुणा बढी भएको पाइएको छ। तर, यसको कारण पत्ता लागेको छैन। बेलायतमा २० हजार संक्रमितमा गरिएको अनुसन्धानमा करिब २० प्रतिशतलाई लङ को-भि’ड भएको पाइएको छ।
भारतमा थोरै संख्यामा लिइएको नमूनाबाट गरिएको अध्ययनमा करिब ३१ प्रतिशतलाई यो समस्या भएको पाइएको छ। संक्रमित स्वस्थ भएको तीन महिनापछि पनि लङ को-भि’ड भएका घटना पाइएका छन्। लङ को-भि’डसँग जोडिएको सबैभन्दा घातक तथ्य चाहिँ यसको असर शरीरका जुनसुकै अंगमा पनि देखिन सक्छ।
यसबाट म’स्तिष्क, फोक्सो वा मिर्गौलासम्म असर हुनसक्छ। मनौवैज्ञानिक समस्यासमेत देखिन सक्छ। लङ को-भि’डसम्बन्धी चे’तना फैलाउने काम गरिरहेको संसारकै ठूलो नागरिक संगठनले को-भि’ड-१९ लाई श्वाससम्बन्धी बिरामीको साटो अब ‘मल्टी-अर्गन डि’जिज’ अर्थात बहु-अंगसम्बन्धी रो’ग भन्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको छ।
उक्त तथ्यलाई विभिन्न अध्ययनहरुले पनि पुष्टि गर्दै गएका छन्। हालै एउटा प्रतिष्ठित साइन्स जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा मुटुको अनियमित चाल, टाउको दु’खाइ, शरीरका नशा देखिनु, बे’हास हुनुजस्ता लक्षण को’रोनाले मुटुमा पारेको असरको प्रमाण भएको जनाएको छ।
त्यसबाहेक को’रोना संक्रमणले पाचन प्रक्रियालाई पनि असर गर्ने अध्ययनहरुले देखाएका छन्। त्यसैगरी ‘पि’ट्युटरी ग्ला’न्ड’ (म’ष्तिस्कमा हुने ग्रन्थी)लाई पनि असर गर्ने बताइएको छ। शरीरको ‘मा’स्टर ग्ला’न्ड’ भनिने यो ग्रन्थीले हाम्रो सबै ह’र्मोन नियन्त्रण गर्छ। त्यसकारण यो मल्टी-अ’र्गन डि’जिज भएको उक्त संस्थाको दाबी छ।
कसलाई कति ख’तरा छ?लङ को-भि’डसँग जोडिएको एक मात्र सकारात्मक कुरा भनेको बि’रामीको शरीरमा को’रोना भाइरस ‘जीवित’ हुँदैन। यसकारण लङ को-भि’ड संक्रामक हुँदैन र उही एक जना बि’रामी मात्र पी’डित हुन्छ। धेरै उमेरका व्यक्ति, महिला र को’रोना संक्रमणबाट ग’म्भीर बिरामी परेकालाई लङ को-भि’डको लक्षण धेरै देखिएको छ।
तर, यसको अर्थ यो होइन कि, युवा, पुरुष र हलुका लक्षण देखिएका संक्रमितमा लङ को-भि’ड हुँदैन। अमेरिकी स्वास्थ्य संस्था सीडीसीद्वारा जारी रिपोर्टका अनुसार सामान्य लक्षण देखिएका संक्रमित, जसको उपचार घरैमा भएको छ, उनीहरुमध्ये करिब एकतिहाईलाई दुईदेखि तीन महिनापछि पोष्ट को-भि’डको सामान्य लक्षण देखिएको छ।
तर, उनीहरुलाई ग’म्भीर भने नबनाएको पाइएको छ। त्यसकारण प्रत्येक संक्रमितले पोष्ट को-भि’ड भएको वा नभएको पत्ता पाउन हरेक तीन महिनामा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सल्लाह दिइएको छ। बच्चालाई भने अहिलेसम्म को’रोना संक्रमण हुने खतरा कम भएको मानिएकाले उनीहरुमा लङ को-भि’ड हुने जोखिम पनि कम नै छ।
तर, बितेको केही महिनामा भएको अध्ययनले देखाएअनुसार को’रोना संक्रमित भएका १२ देखि १५ प्रतिशत बच्चालाई पाँचदेखि १७ महिनापछि लङ को-भि’ड देखिएको छ। वयस्कलाई जस्तै उनीहरुलाई पनि थकान लाग्ने, टाउको दुख्ने, नि’द्रा नआउने र श्वास तथा मुटुको ध’ड्कन अनियमित हुने हुन्छ। बच्चालाई यस्तो असर भएको धेरै कम मात्र फेला परेकाले वैज्ञानिकहरु ठोस निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनन्। -सत्याग्रहबाट भावानुवाद
हिउँले घाँस पु’रियो, चौपाया भोकै
प्रेमिले आ,’त्मह’त्या गरेको २ महिना पछि प्रेमिकाले पनि गरिन आ,’त्मह’त्या
आज देशभर विभिन्न स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना !
जाडो छल्न तापेको आगो शरीरमा स’ल्किदा वृद्धाको मृ’त्यु
योगेश भट्टराईलाई कारवाही गरेरै छोड्छु : मन्त्री आले